Semalt Expert: Sei Uchifanira Kurega Kubva Kubva Black Hat SEO?
Ndiyo chinangwa chemunhu wese ane zvake kana kuti anovaka webhusaiti kuti iite chinangwa. Kuwana chirango kuburikidza nekuzivikanwa kutsvaga injini s hakusi imwe yeiyo. SEO ine zvose zvakanaka uye nerima. Pakati pezvinhu zvakanaka SEO maitiro anoteerera mitemo ndeyo kusikwa kwezvakanaka uye zviri nyore-kuwana-kuwana zvigadziro zvinosangana nezvido zvevanhu vanotarisa.
Chikamu chine rima cheSEO chinosanganisira nzira dzakanaka dzinozivikanwa se "chifukidzo chitubu." Zvinosanganisira zvinhu zvisiri izvo zvinobatsira zvinoshandisa nzvimbo yakakwirira yepa web site paSERP. Vanhu vanobatanidzwa nemagetsi matsvuku vanowanzoedza kutema makona kuti vawane nzira huru pasina kuisa mubasa - design a poster online free template.
Igor Gamanenko, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt Dhijito Dhidhijita, anozvifananidza nenzira inotevera:
Havana kutevedzera mitemo nemitemo
Chiitiko chakashata chevashandi
mharidzo isinganzwisisiki yezvakabatanidzwa mune zvose zviri kuonekwa uye zvisingaoneki
Pakutanga, zvizhinji zvezvino zvinoonekwa sehombodo yakasviba zvaifungidzirwa kuva nzira dzepamutemo dzekutengesa migwagwa uye yakakwirira muSERPs. Yakanga isiripo kusvikira SEO inowanikwa kuti kushandiswa kwavo kushandiswa kwakaisa mawebhusayithi nemagetsi pangozi..Yakaderedza huwandu hwehutano hwewebsite uyewo hunoenderana nezvayo pakutsvaga peji peji. Kubatsirwa kwekushandisa maitiro emagetsi matsvuku kunorarama kwenguva pfupi uye kunopa zvishoma zvishoma mukunyoresa. Uyezve, kana muridzi webasa awanikwa achishandisa nzira dzakadai, injini dzinotsvaga dzinogona kutora nzvimbo yacho kana kuti dzinorambidza kuonekwa mumatsvaga ekutsvaga (izvo zvisingawanzoitiki). Zvikanganiso zvine zvinetso zvisina kunaka pakutsvakurudza kwemigwagwa uyewo rankings. Nzira dzehutsvuku dzinopa sarudzo shoma pfupi yedambudziko iro rese bhizimisi razvino ratarisana naro, rinofanira kupa zvakakosha kuvashambadzi vavo pamusangano unoramba uripo mune ramangwana.
SEO nyanzvi dzinokurudzira kusashandisa chero ipi zvayo nzira dzinotevera kuwana ruvara kune nzvimbo:
Kunosanganisira kuisa sehuwandu hwemashoko makuru ehuwandu mune webhutaneti yehuwandu hwekuwedzera kuonekwa uye mukana wekuzviratidza mumigumisiro yekutsvaga mibvunzo yakawanda. Kana uchidaro, inoita kuti zvinyorwa zvisiye, uye kana injini dzekutsvaga dzichiwana izvi, dzinotarisa nzvimbo yacho sezvo inoshatisa chinangwa chevashandi chinangwa chezvinjini.
Nzira iyi inosanganisira kuvhara mutsara ezvinyorwa zvemashoko machena, zvichiita kuti isingaoneki kune vashanyi. Kunyange zvakadaro, mutsvuku uyu unoziva kuti tsvina dzinokamba nzvimbo iyi dzichazviwana uye dzinotarisa, zvichiita kuti nzvimbo iyi ionekwe pane peji rekutsvaga. Vashandi vanotungamirirwa kune peji chete kuti vawane zvisingabatsiri uye naizvozvo, chiitiko chakaipa.
Izvi ndezvenhema peji peji s iyo inowedzera zvigunwe zvinokambaira nevashandisi vane zvakasiyana zvachose ne URLs. Ivo vari kuedza kushandura injini yekutsvaga kutarisa nzvimbo yacho yakakwirira.
Nzira dzekasha dzemafiro, zvisinei zvisina kunaka, dzinoidza zvikuru uye dzinonzwisisika sezvo dziine mhedziso yenguva pfupi. Zvisinei, kana webhusaiti yacho iwanika, inomira pakarasikirwa nezvimwe muhuwandu hwayo, kana kuti yakaipa zvakadaro, yakarambidzwa kubva kuSERPs.